Fiparitahan’ny valanaretina :: Mijanona ho ahiahy ireo trangana pesta roa ambin’ny folo • AoRaha
Fiparitahan’ny valanaretina Mijanona ho ahiahy ireo trangana pesta roa ambin’ny folo
Nahitana trangan’aretina iray nahiana ho pesta ihany koa, teny Ambatomirahavavy, hoy ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Telo ambin’ny folo ankehitriny ny fitambaran’ireo olona noahiana ho voan’ity valanaretina ity, nanomboka tamin’ny fiandohan’ny volana aogositra 2019. “Tsy misy voamarina ho pesta kosa anefa ny fahavoazan’izy ireo”, raha ny nambaran’io loharanom-baovao io.
Araka ny filazan’ny sekretera jeneralin’ny minisitera, Andrianirinarison Jean Claude dia: “nahitana tranga nampiahiahy telo tany Amboanana Arivonimamo, iray tany Ambatomirahavavy ary sivy tany Faratsiho. Samy tsy voamarina ho pesta ny nahazo ireo olona ireo rehefa natao ny fitiliana”. Ankoatra ireo toerana voalaza ireo dia nohamafisiny fa tsy mbola nahitana tranga tany amin’ny faritra hafa.
Marihina fa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny volana aogositra ny vanim-potoanan’ny pesta. Miisa fito amby efapolo ireo distrika voalaza fa mampiahiahy sy ahitana azy eto amintsika ka hanaovan’ny minisitera andrimaso. Nambaran’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Profasora Rakotonirina Julio, kosa fa misy tsy fitandremana avy amin’ny tsirairay ny fisian’ny aretina pesta.
“Mila mahafantatra ny andraikiny ny rehetra. Tsy aretin’olombelona rahateo ny pesta fa aretin’ny voalavo. Tokony hiezaka mitandro ny fanadiovana ny tanàna satria rehefa maloto dia manatona ho azy ny voalavo ka mamindra ny parasiny. Na eo aza ireo tsy fitandremana hataon’ny tsirairay dia mandray andraikitra hatrany ny minisitera”, hoy ny fanazavany.
Fanafoanana haingana ny delestazy Havela hanafatra solika mivantana ao anatin’ny telo volana ny Jirama
Fitsaboana tany ivelany Salama tsara na mbola marefo aza i Eric Fou Hehy
Betafo Fampielezan-kevitra niafara tamin’ny famoizan’aina
Baolina lavalava – Afrikana :: Nomontsamontsanin’ny Springbok ny Makis vehivavy